eCommerce: kedu ihe ọ bụ. Ozi ECommerce
Anyị na -arịa ọrịa ịnụ ihe eCommerce, okwu mba ọzọ na -ezo aka na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị mana, ọ dị otu a n'ezie? ECommerce ọ bụ ụlọ ahịa ịntanetị ma ọ bụ enwere ihe ọzọ?
Ọ bụrụ na ị chọpụtala na ị maghị ihe echiche nke okwu a bụ, mgbe ahụ ị nwere mmasị na ozi anyị chịkọtara maka gị. N'ezie ozugbo ị gụrụ ya, ị ga -aghọta nke ọma ihe eCommerce bụ.
1 Kedu ihe bụ eCommerce
2 Ụdị nke eCommerce
2.1 Ụdị eCommerce dị ka profaịlụ azụmahịa
2.2 Dị ka usoro azụmahịa si dị
3 Uru na ọghọm ya
4 Otú o si arụ ọrụ
Kedu ihe bụ eCommerce
Ka anyị bido site n'ịkọwa okwu a. Maka nke a, anyị na -ewetara gị nkọwa nke Wikipedia nwere, ebe ọ na -ekwu na eCommerce bụ:
"Usoro maka ịzụrụ na ire ngwaahịa na ọrụ na -eji ịntanetị dị ka isi mgbanwe."
N'ezie, ihe ntụgharị eCommerce bụ "azụmahịa elektrọnik", azụọla ihe n'ịntanetị, agbanyeghị na okwu abụọ a metụtara onwe ha.
Nke ahụ bụ, anyị ga -ekwu maka ụzọ ịzụta na ire, ma ngwaahịa ma ọrụ, mana kama iji ụlọ ahịa nkịtị, anụ ahụ, ebe ị na -aga nweta ngwaahịa ndị ahụ, ma ọ bụghị ya, mmadụ ga -abịa nye gị ọrụ ị nwere. nkwekọrịta., a na -eme ihe niile n'ịntanetị. Mana ọ gaghị abụ site na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, mana ọbụlagodi n'ọgbakọ, ngwa, blọọgụ, wdg. ebe ndị mmadụ na -enye ngwaahịa na / ma ọ bụ ọrụ, enwere ike iwere ya dị ka eCommerce.
Ọ bụrụ na anyị dabere na data, uto nke eCommerce bụ ihe ịtụnanya. Kwa afọ, amaara na enwere ọtụtụ azụmaahịa elektrọnik na -arụ ọrụ. N'ihe banyere Spain, mmụba a mere na 2017, mgbe azụmahịa ịntanetị na -azụ ahịa bilitere. Mana na 2020, n'ihi ọrịa na -efe efe nke Covid, oriri ịntanetị a dị elu karịa.
Nke nta nke nta, a na -ahazi ọnụ ọgụgụ eCommerce, ruo n'ókè na ụlọ ahịa anụ ahụ na ụlọ ọrụ amụbaala azụmaahịa ha n'ịntanetị ka ha nwee ike kpuchie ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ahịa ma n'obodo ebe ha dabere na na mba ndị ọzọ. nke ụwa dum.
Ụdị nke eCommerce
Ọtụtụ mgbe, mgbe ị na -achọ ụdị eCommerce dị, ị ga -ahụ ọkwa abụọ: n'otu aka, dị ka profaịlụ azụmahịa si dị; na nke ọzọ, dị ka usoro azụmaahịa si dị.
Ha abụọ na -enye anyị ụdị e-commerce abụọ dị iche iche. Anyị na -enyocha ha.
Ụdị eCommerce dị ka profaịlụ azụmahịa
N'okwu a, ị ga -enwe nhazi ọkwa zuru ụwa ọnụ dabere na ịchọpụta onye bụ onye ma ọ bụ ụlọ ọrụ na -ere yana onye ma ọ bụ ụlọ ọrụ na -azụta.
Yabụ, anyị ga -achọ:
B2B. Ha bụ ndebiri maka Business to Business, ya bụ, site na azụmahịa ruo na azụmaahịa. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ndị ahịa ga -abụ ụlọ ọrụ ọzọ.
B2C. Acronyms for Business to Consumer, ya bụ, site na azụmaahịa ruo n'ahịa. Nke a bụ ihe a na -ahụkarị, ya bụ, ụlọ ahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ na -ere ngwaahịa yana ndị ahịa na -azụrụ onwe ha.
C2B. Nke ahụ bụ, Onye na -azụ ahịa. N'adịghị ka nke gara aga, ọ bụ ndị na -azụ ahịa na -aghọ "ndị na -ere", ebe ụlọ ọrụ na -ekwu maka ndị na -ere ya.
C2C. Onye na -eri ihe na onye ahịa. Nke ahụ bụ, site na onye na -azụ ahịa ruo onye ahịa. Ha bụ ụlọ ọrụ aka abụọ.
N'ụzọ doro anya, enwere nhazi ọkwa ndị ọzọ, dị ka G2C (Gọọmentị na ndị ahịa) ma ọ bụ nke ọzọ, C2G; ma ọ bụ B2E nke ga -abụ azụmahịa maka onye ọrụ, ya bụ, site na ụlọ ọrụ ruo onye ọrụ.
Dị ka usoro azụmahịa si dị
N'aka nke ọzọ, nhazi ọkwa ọzọ, ikekwe kacha dokwuo anya, bụ ebe a dabere n'ihe azụmaahịa raara nye a na -ekewa ya otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ.
Ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Ọ kacha mara amara, ibe weebụ ebe ndị ahịa nwere ike ịzụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ.
Mbupu. Ọ dị iche na nke gara aga na ọ bụghị onye na -ere ere, ya bụ, ụlọ ọrụ ị na -ahụ na weebụ na -elekọta mbupu, mana ọ bụ ndị ọzọ na -eme ya.
Mgbakwunye eCommerce. Ihe e ji mara ya bụ ịzụrụ ngwaahịa mana ọ bụghị n'otu ibe ebe a hụrụ ya, kama na ọzọ. Anyị nwere ike ịsị na ọ na -arụ ọrụ dị ka onye nnọchi anya ịnye ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Ndị otu: Ha bụ ndenye aha oge ọ bụla a na -eziga oge ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, mbupu ngwaahịa kwa ọnwa.
Ahịa. A maara ha dị ka netwọkụ nke ụlọ ahịa, ya bụ, ọ nwere ọtụtụ ụlọ ahịa gbakọtara iji ree ngwaahịa ha.
Ọrụ. Ha bụ azụmahịa elektrọnik ebe, kama ire ngwaahịa, ihe ha na -eme bụ ire ndụmọdụ, ọzụzụ, wdg.
Obi abụọ adịghị ya na eCommerce na -eweta ọtụtụ uru, kamakwa ọghọm. Yabụ, mgbe ị na -eme mkpebi ọ bụla metụtara imepụta azụmahịa elektrọnik, a ga -eburu n'uche ya.
N'etiti uru eCommerce na -enye bụ enweghị usoro, na ihe ha nwere ike zụta n'oge ọ bụla; enwere obere ụgwọ na uru karịa maka ụlọ ọrụ ahụ; ọ na -erutekwa ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ahịa.
Ugbu a, ihe ịma aka ị na -eche maka azụmahịa a bụ enweghị ntụkwasị obi, ọkachasị na mbido, mgbe onweghị onye ma gị; na enweghị ike ịhụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ; na, nke kachasị, eziokwu nke ịntanetị, yana ịmara otu esi agagharị na saịtị, iji zụọ ahịa.
Maka ihe ndị a niile dị n'elu, anyị ga -agbakwụnye na oge nchere (nke dịla mkpụmkpụ n'ọtụtụ oge), dị. Ọ bụghị ozugbo. Agbanyeghị na akụkụ ya, ọnụ ahịa ahụ na -adị ọnụ ala (anyị na -achụ àjà na -eche ọnụ ahịa ka mma).
Otu eCommerce enweghị ọtụtụ ihe omimi. N'ezie, njikwa ya dabere na otu ọrụ a ga -eji ụlọ ahịa ma ọ bụ mgbanwe mee. Iji mepụta ya, ị ga -echerịrị echiche nke na -enye ohere n'ezie iji nweta uru, ihe adịghị mfe inweta. Ọzọkwa, ịkwesịrị mee atụmatụ ma nwee nnukwu ndidi ebe ọ bụ na ihe ịga nke ọma anaghị abịa n'otu abalị.
Enwere ihe ụfọdụ ị ga -eburu n'uche dịka:
Mụọ ọnọdụ ahịa.
Mee atụmatụ azụmahịa.
Wulite iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa.
Họrọ ikpo okwu dị mfe maka ndị ahịa iji.
Lekọta ngwa ngwa na ụzọ ịkwụ ụgwọ.
Dịka ị nwere ike ịhụ, okwu eCommerce karịrị karịa ka ị nwere ike iche na mbụ, mana ugbu a ị nwere echiche doro anya, ọ nwere ike bụrụ na ị ga -ahụ ihe atụ nke ụdị anyị tụlere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » eCommerce: kedu ihe ọ bụ
Ebee ka anyị nwere ike iji Bizum zụta?